Ilinen yelinen entsha eluhlaza ukusasaza i-8208 yamakhethini amnyama, i-China Faux ilinen entsha yokutshiza okuluhlaza 8208 amakhethini amnyama abavelisi, abaxhasi, iFektri - iZhejiang Rancho Santa Fe home textile Co., Ltd
Ilinen yelinen eluhlaza okokutsha okuCoca okuyi-8208 kwamakhethini oMnyama
Inani Model: 8208
IMIBALA EZAHLUKILEYO NOKUQALA KWENKQUBO -Le khethini yokumnyama iyafumaneka ngombala ohlukeneyo okanye ukudityaniswa kwemibala emininzi. Abathengi banokukhetha umbala kunye nendawo edibeneyo ngokukhululekileyo. Ilaphu ngokwalo lelinye lezona zixhobo zithandwayo kwihlabathi liphela. Amakhethini egumbi-mnyama anceda ukugcina igumbi lokulala limnyama ngokukhethekileyo-lilungele ukulala ngenjikalanga okanye ukulala ekuseni. Ukongeza ekukhuthazeni iimeko zokulala ezingcono, ikhethini liqinisekisa ubumfihlo obupheleleyo kwaye linceda ukunciphisa ingxolo yangaphandle yendawo ethe cwaka ngaphakathi.
I-AMBENCECE YOKUQHUBA NOKUGQIBELA KWAMAXESHA OKUSEBENZA- Ikhethini inokusetyenziselwa kwigumbi lokutyela ukwenza indawo ebalaseleyo okanye kwigumbi losasazo okanye eofisini ukunciphisa ukuqaqamba kumabonwakude okanye kwizikrini zekhompyuter. Ngapha koko, iyanceda ukukhusela ikhaphethi kunye nezinto zokwenza izinto ukuba zingapheli kwimibala ebangelwa lilanga.
I-Royal blue 100% ipholiyesta yambethe-HF29023
Igumbi lokulala laseLwandle eliLuhlaza okwesibhakabhaka Igumbi eligqunyiweyo elingenaNgubo